Nooca 'Spotify desktop' waxaa lagu cusbooneysiiyaa naqshad cusub iyo inbadan | Androidsis
Manuel Ramirez | | Noticias, Streaming
Spotify ayaa hadda ku dhawaaqday cusbooneysiinta barnaamijka desktop-ka oo leh naqshad cusub iyo taxane ah qaabab cusub oo loogu talagalay macaamiisha qaddarinta, kuwaas oo hubaal ogaan doona sida loogu qiimeeyo inta ay le'eg yihiin.
Naqshaddan cusub waxaa loo sameeyay si ay uga dhigaan waxyaabaha ay doorbidayaan isticmaaleyaashu mid dareen leh mahadnaqa naqshadeynta la hagaajiyay iyo a si fiican u xakamaynta abuurista liiska ama liiska ciyaaraha.
1 Interface cusub A for app desktop
2 Astaamaha cusub: abuur liisaska liiska si fudud oo fudud Spotify
3 Loogu talagalay macaamiisha caymiska: keydinta baaxadda
Interface cusub A for app desktop
Cusboonaysiinta 'Spotify' waxay u timaaddaa nooca desktop-ka ee adeegga qulqulka muusikada iyo ujeeddada in waayo-aragnimada dhagaysigu ay tahay tan ugu fiican uguna macquulsan. Taasi waa, waxaan iska dhignay barnaamijka Android-ka hada si aan diirada u saarno midka aan ku haysan karno kombuyuutarkeena ama laptop-ka.
Cusbooneysiin ah, sida Spotify lafteeda sheegto, ayaa timid ka dib bilooyin tijaabo ah oo ay madal ayaa jawaab ka helay isticmaalayaasha. Waxaan dhihi karnaa dayactirkani wuxuu u heellan yahay nashqad nadiif ah iyo kontaroolo tiro badan.
Waana runtaa waan ogahay waxay bedeleen waxyaabaha qaarkood boos ahaan sida ku dhacda qofka raadinaya taasna waxay hadda ku taal dhinaca bidix ee bogga badhanka. Si kale haddii loo dhigo, waxa la raadinayo ayaa ah adeegsadaha inuu awood u yeesho inuu raadiyo waxyaabaha ay rabaan si dhakhso leh.
Laba sheeko oo kale ayaa ah desktop-ka isticmaale kasta iyo intaas hada waxaa kujira fanaaniinta aad jeceshahay iyo heesaha, iyo tan labaad, awoodda lagu ciyaaro idaacadda heesaha ama farshaxanka si fudud adigoo gujinaya badhanka "..."
Astaamaha cusub: abuur liisaska liiska si fudud oo fudud Spotify
Marka laga soo tago isbeddelka naqshadeynta ee laga dhigay mid nadiif ah, waayo-aragnimada ah abuurista liiska iyo maaraynta, si aan awood badan ugu yeelano iyaga.
Kuwaas waxaa ka mid ah awoodaha ay tahay inaan helno:
Ku dar sharaxaada liistada liiska
Soo gal sawirro
Kalasooc heesaha jira
Ku dar waxyaabo cusub mahadsanid baarka raadinta ee gundhigga ah
Isticmaalayaasha iyaga dib u soo saara, waxay u arki doonaan sidii ugub awood u lahaanshaha edit-ka safka iyo daawashada heesaha in dhageystay dhawaanahan barnaamijka desktop-ka. Ikhtiyaarrada kale waxay noqon doonaan awoodda lagu dalban karo maktabadda iyadoo la adeegsanayo liis hoos-u-dhac ah oo cusub oo aad ka heli doontid ku yaal geeska midig ee sare.
Waxaan ula jeedaa, waa maxay waxaan awood badan ku yeelan doonnaa fadhiyada dhageysiga aan ka dhigno liistadayada ugu xiisaha badan Spotify.
Loogu talagalay macaamiisha caymiska: keydinta baaxadda
Waxyaabaha kale ee cusub ee Spotify ayaa ah awooda macaamiisha qaddarka leh kala soo bax muusikada aad jeceshahay iyo boodhadhka aad uhesho khadka tooska ah. Laga soo bilaabo barnaamijka desktop-ka waxaan hadda ka heli karnaa badhanka soo dejinta si aan muusiggeenna uga jirin khadka.
Waliba waa lagu daray tuubbooyin cusub oo cusub inaad ogaan karto markii barnaamijka lagu cusbooneysiiyay dariiqa toobiye + +?
Tani cusbooneysiinta cusub ee Spotify ayaa bilaabatay inay soo baxdo si ay u gaarto dhammaan isticmaaleyaasha adduunka toddobaadyada soo socda si aan u ogaan karno is-dhexgalka cusub ee la hagaajiyay iyo dhammaan wararkaas la xiriira liiska-soo-saarka iyo qaabka qadka ee nooca desktop-ka. Haddiise aad dareento sida muusikada, ha seegin fanaaniinta ugu dhageysiga badan sanadka 2020.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Spotify waxay cusbooneysiineysaa barnaamijkeeda desktop iyada oo qaab cusub loo shaqeynayo
Codsiyada lagu soo galo shaqada bilaashka ah
8-da barnaamij ee ugufiican ee lagu wadaago guri aad mobilkaaga kuleedahay